अनर र ह्वावेका पुराना फोनमा हार्मोनी ओएस उपलब्ध - Tech News Nepal Tech News Nepal
मंगलबार, आश्विन ५, २०७८
काठमाडौं । तपाईंसँग ह्वावे तथा अनर ब्राण्डका पुराना स्मार्टफोन छन् भने पक्कै पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ । किनभने ईएमयूआई अपडेटसमेत नपाउने पुराना फोनले हार्मोनी ओएसको नयाँ अपडेट पाउँदै छन् । जसले प्रयोगकर्तालाई पुनः नयाँ फोन बोकेको महसुस दिनेछ ।
ह्वावे पोलेन क्लबमा उपलब्ध जानकारीअनुसार कम्पनीले नयाँ लटमा प्रयोगकर्तालाई हार्मोनी ओएस उपलब्ध गराएको छ । जसमा पुराना स्मार्टफोन बढी समावेश भएका छन् । यसअघि हामोर्नी ओएस कम्पनीले ह्वावे तथा अनरका कुल ६४ मोडलमा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
जसमा अनर ब्राण्डअन्तर्गत अनर ३० सिरिज, अनर भी३० सिरिज, अनर-प्ले ४ प्रो, अनर भी६ ट्याब्लेट, अनर एक्स १०, अनर ३० एस, अनर एक्स१० म्याक्स, अनर ३० युथ एडिसन, अनर प्ले४ रहेका छन् ।
त्यस्तै ह्वावे ब्राण्डअन्तर्गत ह्वावे पी२०, ह्वावे मेट १०, ह्वावे पी२० प्रो, ह्वावे मेट १० प्रो, ह्वावे नोभा ५आई, ह्वावे मेट १० प्रोसिम डिजाइन, ह्वावे नोभा ४, ह्वावे मेट आरएस प्रोसिम डिजाइन, ह्वावे नोभा ४ई लगायत छन् ।
उक्त सूचीमा थप गर्दै कम्पनीले तेस्रो चरणमा थप मोडलमा हार्मोनी ओएस उपलब्ध गराउने भएको हो । हार्मोनी ओएस उपलब्ध हुने नयाँ मोडलका स्मार्टफोनको सूची यसप्रकार छः
अनर २० लाईट(युथ एडिसन)
अनर १० लाइट(युथ एडिसन)
अनर प्ले थ्री
ह्वावे इन्जोय २० फाइभ जी
ह्वावे इन्जोय ९एस
ह्वावे इन्जोय १०
१२० वाट फास्ट चार्जिङसहित बिहीवार सार्वजनिक हुँदै रेड्मी नोट ११
काठमाडौं । साओमीले आउँदो बिहीवार रेड्मै नाोट ११ सिरिज सार्वजनिक गर्दैछ । हालै एक जानकारीअनुसार
आफ्नो पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै ओप्पो
काठमाडौं । चिनियाँ ब्राण्ड ओप्पोले आउँदो महिना आफ्नो पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको
तीन मोडलमा सार्वजनिक हुँदै रेड्मी नोट ११, कति होला मूल्य ?
काठमाडौं । साओमीले आउँदो अक्टोबर २८ अर्थात् कात्तिक ११ गते ‘रेड्मी नोट ११’ सिरिज सार्वजनिक
चिप अभाव अझै दुई वर्षसम्म कायम हुन सक्ने, के होला असर ?
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि संसारभर नै चिप अभाव भइरहेको छ । चिप अभावका कारण